Qaadacaada Ben & Jerry ee Israel waxay ku kacday shirkad waalidkeed $111 milyan
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Jebinta Wararka Caalamka » Wararka Mareykanka » Qaadacaada Ben & Jerry ee Israel waxay ku kacday shirkad waalidkeed $111 milyan
Jebinta Wararka Caalamka • Jebinta Wararka Safarka • Safarka Ganacsiga • kariska • dhaqanka • Investments • Israa’iil Wararka Jebinaya • News • Dadka • Waajib ah • Shopping • Dalxiiska • Warka Safarka Safarka • Daalacanayo Hadda • Wararka Mareykanka
Qaadacaada Ben & Jerry ee Israel waxay ku kacday shirkad waalidkeed $111 milyan.
Sanduuqa hawlgabka ee New York, kaas oo ku maalgeliya in ka badan 800 milyan oo doolar guud ahaan Israa'iil, ayaa hore uga digay shirkadda bishii Luulyo in qaadacadu ay waxyeello u geysan doonto maalgashigeeda Israel.
Shirkadda weyn ee jalaatada ee Ben & Jerry oo fadhigeedu yahay Vermont ayaa wajaheysa dhaqaale xumo ka dhalatay qaadaceeda Israel.
Sanduuqa Hawlgabka Guud ee Gobolka New York waxa uu leexiyaa hantida saami qaybsiga ee shirkadda waalidka ee Ben & Jerry.
Qaadacadu, kooxdu waxay leedahay, waxay ku xad gudubtaa siyaasadaheeda ka dhanka ah dhaqdhaqaaqa BDS ( qaadacaada, leexinta, iyo cunaqabataynta).
Sanduuqa Hawlgabka Guud ee Gobolka New York ayaa ku dhawaaqay in uu leexin doono hantida saami qaybsiga Ben & JerryShirkadda waalidka, Unilever PLS, oo ku saabsan ka-qaybgalka shirkadda ee hawlaha BDS-ka-hortagga Israa'iil.
"Kadib dib u eegis qotodheer," sanduuqa ayaa sheegay in ay leexin doonto haysashada sinnaanta ee Unilever PLS. "Dib-u-eegis ku saabsan hawlaha shirkadda, iyo qaybteeda Ben & Jerry', waxaan ogaaday inay ku hawlan yihiin hawlaha BDS ee hoos yimaada siyaasadda sanduuqa hawlgabka," Tom DiNapoli, maamulaha sanduuqa hawlgabka, ayaa yidhi go'aankeeda ah inay xidhiidhka u jarto kooxda liberaaliga ah ee fadhigeedu yahay Vermont.
Qaadacadu, kooxdu waxay leedahay, waxay jebinaysaa siyaasadahooda ka dhanka ah dhaqdhaqaaqa BDS ( qaadacaada, leexinta, iyo cunaqabataynta).
Sanduuqa hawlgabka ee New York, kaas oo ku maalgeliya in ka badan 800 milyan oo doolar guud ahaan Israa'iil, ayaa hore uga digay shirkadda bishii Luulyo in qaadacadu ay waxyeello u geysan doonto maalgashigeeda Israa'iil.
Qaadacidda, taas oo arkay Ben & Jerry diiday in lagu iibiyo Jalaatada ‘Dhulka Falastiin ee la haysto’ ee Daanta Galbeed iyo Bariga Quddus, waxa ay la kulantay jawaab celin adag oo kaga timid khubaro iyo sharci-yaqaanno badan oo Maraykan ah, iyo sidoo kale saraakiil badan oo Israa’iili ah.
Qaadacadu waxay sidoo kale keentay jeesjees ka dib Ben & JerryAasaasaha Ben Cohen ayaa horraantii bishan horraanteedii ka horyimid doorashada aagagga la qaadacay, iyada oo shirkadu ay qaadatay mowqif ka dhan ah. Israa'iil, laakiin maaha gobol sida Georgia oo kale ah, oo ay wada-aasaasayaashu sheegeen in uu leeyahay arrimo waaweyn oo xuquuqda codbixinta ah oo ay kiciyeen sharci-dajiyayaasha Jamhuuriga. Markii la weydiiyay sababta Georgia ay u qaadacday shirkadu, Cohen wuxuu ku jawaabay, "Ma aqaan."
"Sababtaas awgeed, waa inaanaan jalaatada meelna ku iibin," ayuu yidhi. Aasaasayaasha shirkadda ayaa isku tilmaamay inay yihiin "Yuhuud kibir badan" oo si fudud uga soo horjeeda siyaasadaha Israa'iil.
Unilever waxay difaacday qaadacaada bishii Agoosto warqad ay u dirtay sanduuqa hawlgabka ee New York, iyadoo maamulaha guud ee Alan Jope uu sheegay in shirkaddu ay kumannaan ka shaqaaleysiiso Israa'iil oo ay malaayiin ku maalgelisay halkaas, laakiin ma farageliyaan ficillada guddiyada "madax-bannaan".